I Tailandy, na Fanjakan' i Tailandy, dia firenena any Azia Atsimo-Atsinanana. Ny velarantaniny dia misy eo amin' ny 514 000 km2 eo ho eo; ary ny isa-mponiny dia 65 tapitrisa, araka ny fanisana natao tamin' ny taona 2008. Atao hoe ประเทศไทย, Prathet Thai na ราชอาณาจักรไทย, Ratcha Anachak Thai izy amin' ny fiteny tailandey.
Niova anarana ilay fanjakana tamin' ny 1949: Siam no anarany taloha. I Tailandy dia mizara sisintany amin' i Mianmara any andrefany, amin' i Malaizia any atsimo, amin' i Kambôdia any atsinanana ary amin' i Laôsy any avaratra-atsinanana. Fanjakà-mpanjaka ara-dalàm-panorenana i Tailandy hatry ny taona 1932.
Ny renivohitr' i Tailandy dia i Bangkok (Krungthep - กรุงเทพฯ, "Tanànan' ny Anjely"). Ny fiteny tailandey no teny ôfisialy any Tailandy ary ny baht no sandam-bola.
Tranonkala Ofisialy[hanova | hanova ny fango]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tailandy&oldid=1045882"
Voaova farany tamin'ny 19 Jiona 2022 amin'ny 09:17 ity pejy ity.